प्रदेश पदाधिकारीको तलब : कसको कति ? - प्रशासन
मंसिर २७ गते, २०७५
काठमाडौं । सरकारले प्रदेशमा रहने सबै पदाधिकारीको सेवा-सुविधा र तलबमान तोकेर सातै प्रदेशमा पठाएको छ। सरकारले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब ६० हजार ९ सय ७० तोकेको छ। यसैगरी, मन्त्रीको ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायक मन्त्रीको तलब ४७ हजार तोकिएको छ।
यसैगरी, प्रदेशसभाका सभामुखको मासिक तलब ५३ हजार र उपसभामुखको ५० हजार कायम गरिएको छ भने विपक्षी दलका नेताको पनि ५० हजार नै कायम गरिएको छ। विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिलाई मासिक ४८ हजार रुपैयाँ तलबमान कायम गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
यस्तै, प्रदेशसभाका सदस्यको मासिक तलबमान ४५ हजार कायम गरिएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई आवासको व्यवस्था गरिएको छ भने मन्त्रीलाई आवासको सट्टा मासिक १२ हजार दिइनेछ। यसैगरी, मुख्यमन्त्रीले फर्निचरबापत एकमुष्ट १५ हजार र दैनिक भ्रमणभत्ता २५ सय पाउनेछन् भने मन्त्रीहरूलाई दुई हजार भत्ता दिइने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा प्रदेश पदाधिकारीको तलबमान तोकेर पठाएको जनाएको छ। प्रदेश सरकारले यही तलबमानअनुसार प्रदेशका सबै पदाधिकारीको तलब सुविधा तोक्ने बताइएको छ। केन्द्र सरकारले तलब तोक्दा एकरूपता कायम गर्नसमेत प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव डिल्लीराम शर्माले सातै प्रदेशमा एकरुपता कायम होस् भन्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको तलबमान प्रदेशमा पठाइएको जानकारी दिए। ‘यो प्रदेशको आफ्नै अधिकार हो तैपनि एकरुपता होस् भनेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत हामीले मोडल पठाएका हौं’, उनले भने।
संविधानको धारा १९६ मा प्रदेशका सबै पदाधिकारीको पारि श्रमिक र सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशसभाले त्यस्तो कानुन नबनाएसम्म सेवा–सुविधा तोक्न सहज होस् भन्दै सरकारले औचित्यका आधारमा तलबमान तयार पारेर पठाएको हो।
तलब : ६०९७०
फर्निचर : १५०००
धारा, सञ्चार स्बिलअनुसार
आवास व्यवस्था, दैनिक भत्ता : २५ सय
तलब : ५२०००
धारा, बिजुली र सञ्चार स्बिलअनुसार
आवास स्मासिक १२ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता : २ हजार
बैठक भत्ता : ७५०
यात्रा बिमा : १० लाख
सञ्चार सुविधा स्मासिक १५ सय
आवास सुविधा स्मासिक १२ हजार
आवास सुविधा : १२ हजार,
वर्षमा एकपटक, यात्रा बिमा १० लाख, आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
फाल्गुन ५ गते, २०७४ - ०७ः५१ प्रकाशित
साउन १ देखि पेन्सनको सट्टा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण
जेष्ठ १५ गते, २०७५
बैशाख २२ गते, २०७५
यसरी भयो १० वर्षमा नभएको काम १० दिनमै !
१७ अर्वको सुन तस्करीमा प्रहरीको भाग दुई करोड २० लाख !
बैशाख २१ गते, २०७५
बिरामी भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुहोस् मृत्युको कारक बनिएला नि ?
मोदी आउने दिन सार्वजनिक बिदा
शुक्रबार कम्पनीका बस सञ्चालन हुँदै, क्षति भए सरकारले क्षतिपूर्ति दिने
इमान्दार प्रहरी चाहियो !
बैशाख २० गते, २०७५
यातायातमा सिन्डिकेटः वाम व्यवसायीद्धारा वार्ताका लागि सरकारसँग याचना
दलआबद्ध ट्रेड युनियन खारेज हुने, मन्त्रालयले थाल्यो छलफल
बैशाख १९ गते, २०७५
मोदीको सुरक्षार्थ जनकपुरमा सात हजार सुरक्षाकर्मी
जनकपुरको साँचो मोदीलाई बुझाउने मेयरको तयारी
विदेशी दूतावासले अब सीधै लगानी गर्न नपाउने
सार्वजनिक यातायातको विकल्प खोज्दै सरकार
साढे ३३ किलो सुन प्रकरण: एकमहिने अनुसन्धान -न सुन भेटियो न गोरे
पूर्वकर्मचारीलाई राजनीतिक नियुक्ति नदिइने
गलत औषधि बेचे जन्मकैद, मान्यताप्राप्त बिक्रेताले मात्र औषधि बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने
बैशाख १८ गते, २०७५
यी हुन् सरकारले बन्द–हडताल निषेध गरेका १८ अत्यावश्यक क्षेत्र
भदौ १ देखि खुला कारागार !
स्थानीय तहमा साढे सात हजार कर्मचारी अभाव
बैशाख १७ गते, २०७५
यस्तो बन्दै छ संघीय सुरक्षा
सरकारलाई झुक्याउदै चलाखीपूर्ण तरिकाले उच्च प्रशासकहरुले अध्यादेश ल्याउन सफल
यसकारण छ विभेदकारी : कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५
डा मनोज कुमार शाही
महिला विरुद्धको हिंसा : कडा कारबाही कि व्यापक कारबाही ?
रविन्द्र नाथ रेग्मी
कारबाहीका दश लडाकू मारिए, १२ पक्राउ
टर्कीमा रेल दुर्घटना, चारको मृत्यु, ४३ घाइते
अमेरिकी पत्रिका ‘टाइम’को ‘वर्ष व्यक्तित्व’मा खसोग्गी
मोबाइल एप्स सञ्चालनमा